Sokajian’i Mozambika ho heloka bevava ny fampanambadiana ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voasazy hatramin'ny 12 taona an-tranomaizina
Voadika ny 06 Aogositra 2019 19:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, українська, Français, Ελληνικά, Español, Nederlands, Italiano, Deutsch, Português
Sekolin-jazavavy Mozambikana. Sary an'i Mr.Fink's Finest, CC BY-NC-SA 2.0
Tamin'ny 18 jolay, nolanian'ny Antenimieran'ny Repoblian'i Mozambika ny lalàna iray manameloka ny fanambadiana olon-dehibe iray sy ankizy latsaky ny 18 taona.
Manamarika mazava tsara ilay lalàna vaovao fa ny olon-dehibe iray manambady ankizy sy adolantsento dia iharan'ny sazy fanagadrana mety hahatratra hatramin'ny 12 taona ary ny fianakaviana iray izay manery ny zaza hanaiky ilay fanambadiana dia ho saziana hatramin'ny valo taona an-tranomaizina.
Miaraka amin'ny fankatoavana ilay lalàna, nifamihimpihina sy feno tsiky ireo mpikambana anatina fikambanana fiarahamonina sivily, izay an-taona marobe no efa nangataka io karazan-dalàna io.
Anisan'ny manana taha tena avo be amin'ny resaka sendikà tanora erantany i Mozambika. Fanadihadiana iray nataon'ny Tambajotra Afriàna Tatsimo manohitra ny Fanondranana Ankizy no manakilasy an'i Mozambika ho eo amin'ny laharana faha-11 manerantany miaraka amin'ny taha-na fanaovana sendikà tena avobe tahaka izany ary ho eo amin'ny laharana faha-2 amin'ireo firenena any atsimon'i Afrika.
Lazain'ireo antontanisa ofisialy fa manodidina ny 500 000 ireo vehivavy Mozambikana 20 ka hatramin'ny 24 taonano manambady alohan'ny faha 18 taonany ary manodidina ny 57 000 kosa ireo manambady alohan'ny 15 taona.
Vakio ihany koa: Mozambika, Cote d'Ivoire manao ezaka ara-pitsaràna ho an'ny zon'ireo vehivavy sy ankizy (teny anglisy)
Araka ny voalazan'ireo fanadihadiana marobe, ny fampanambadiana aloha loatra no antony voalohany mahatonga ireo ankizivavy handao ny sekoly. Mahatonga azy ireo ho voan'ireo aretina vokatry ny firaisana ara-nofo toy ny SIDA na ny famaniana lava ihany koa izany, izay mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza.
Ny Filohan'ny Parlementan'ireo ankizy – fikambanana sivily iray miasa miaraka amin'ireo ankizy sy adolantsento ao Mozambika – Kino Fernando Caetano dia nanambara fa:
Fandresena ho an'ireo ankizy sy ny fiarahamonina Mozambikana amin'ny ankapobeny ilay lalàna vao avy nankatoavina. Ilay lalàna dia tena vokatry ny ezaka nataon'ny governemanta Mozambikana (MGCAS), ny Antenimieran'ny Repoblika sy ny Fiarahamonina Sivily (CECAP).
Fanamby aorian'ny nankatoavana ilay lalàna
Raha niresaka tamin'ny Global Voices, Dércio Chiemo, mpampianatra sy mpikatroka sosialy ao an-toerana, dia manipika fa, raha toa ily lalàna ka fandresena ho an'ireo rehetra mpisehatra miasa ho famongorana ny fanambadiana aloha loatra, dia hila ny fanohanana hatrany kosa ireo vondrom-piarahamonina izay mbola manohy mirotsaka ao anatin'io fomba fanao io.
Fandresena io ho an'ireo fikambanana izay niray hina sy nitolona mba hankatoavana an'ity lalàna ity. Fandresena goavana ihany koa io ho an'ireo rehetra feo sy hiakiaka tsy re. hikakiak'ireo ankizivavy izay noterena hanambady mialohan'ny fotoana, tsy fidiny sy tsy nakàna ny faneken-dry zareo, tsy nisy fihainoana azy ireo akory. […]
[Saingy] Tsy afaka hihevitra [fotsiny] isika hoe satria misy ity lalàna ity, dia hifarana hatreo ireo fampanambadiana mialoha, io dia mampiseho fa manomboka hatreto dia tokony hanomboka hiasa isika hahafantaran'ny olona ilay lalàna ary mihoatra noho izay, hanampy amin'ny fampihenana, eny fa hatramin'ny fampitsaharana ny fanambadiana aloha loatra aza.
Ho an'i Júlio Mutisse, manana maripahaizana lisansa amin'ny Lalàna, tao amin'ny Anjerimanontolon'i Eduardo Mondlane, ny olan'ireo fanambadiana aloha loatra dia lasa lavitra noho ny olana tsotra ara-pitsarana, satria ilaina ny mahatakatra ny zavamitranga manontolo:
Goavana ny fanamby. Mihoatra lavitra noho ny fankatoavana ilay lalàna izany. Araka ny efa fantatsika, manana lalàna tsara marobe ny firenentsika izay mitsinjo an'ireo fepetra matotra mikasika an'ireo fitondrantena sasantsasany, saingy mbola mitohy mahitamaso tsy mitsahatra ireny fitondrantena.
Dingana iray tsara izany, saingy tsy maintsy takarinao io trangan-javatra io ary iadianao ireo antony mahatonga azy. Nahoana ny fanambadiana tany aloha no narindra araka ny nanaovana azy? Toy ny ahoana ny fiarahamonina tamin'izany? Vaovao ve io trangan-javatra io? Tsy maintsy iasantsika ny momba ireo antony ary miaraka amin'ny hakingantsaina be.
Mandritra izany fotoana izany, nambaran'i Fernando Moiane fa ny tena olana goavana dia mitoetra ao anatin'ireo fombandrazana sy ireo fahazarana ara-kolontsaina ananan'ireo Mozambikàna.
Eny, ilaintsika ny miady manohitra ireo fanambadiana mialohan'ny fotoana, saingy heveriko fa zara raha nisy ny asa nataon'ny Parlemantera ary tsy mahita fahonanana na kely aza ao anatin'ny kolontsaina uio lalàna io, ny fomba amam-panao Mozambikana ity lalàna ity. Amiko, mankamin'ny tsy fahombiazana ity lalàna ity satria tsy mahasahana manontolo ireo fomba amam-panao tranainy ananan'ireo vahoaka afrikàna amin'ny ankapobeny sy ny an'i Mozambikàna manokana.
PS: Omano ireo fitohitohizàna mba hamondronana ireo lehilahy ao Chibuto, Homuine, Mutarara, Macomia, sy ny sisa.